Wararka uu Warsidaha Garowe Online ka helay kulanka ayaa xaqiijinaya in xubnaha shirkaasi soo xaadiray uu kamid yahay Mukhtaar Roobow [Abuu Munasuur] kaasoo qudhiisa kamid ah dadka uu hamiga kaga jiro xilka ugu sareeya KG.
Ujeedka kulankaan ayaa la fahansan yahay inuu yahay sidii cadaadis loogu saari lahaa Madaxwayne Shariif Xasan inaanu dib dambe ugu soo laaban doorashadda dhaceysa bisha November xafiiska Madaxtooyadda, kaasoo uu hayey sanadihii udambeeyay.
Illo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa u sheegay Warsidaha GO in dowladda Federaalka Soomaaliya ay xusul-duub ugu jirto sidii doorashadda madaxwaynaha Koonfur Galbeed ugu soo bixi lahaa Murashax siyaasad ahaan ay iska dhow-yihiin, kuna feker ah.
Siyaasiyiin dhowr ah ayaa utaagan xilkaan kuwaasoo dowladdu dooneyso inay ku bixiso wax kasta sidii uu doorashadda Koonfur Galbeed oo ka xamaasad badan sanadkaan kuwii hore, waxaana socdo olale iska soo horjeeda oo dhinacyo kala duwan ah.
Shariif Xasan Aadan, Madaxwaynaha Koonfur Galbeed ayaa dhankiisa kawada degaanada Koonfur Galbeed olale xoogan, kaasoo uu ku doonayo inuu xafiiska dib ugu soo laabto, waxaana uu kulamo gaar-gaar ah la yeelanayaan hogaanka Beelaha.
Todobaadka dambe ayuu qorshuhu yahay in xarunta maamulka Koonfur Galbeed ee Baydhabo ay gaareen tiro Murashaxiin ah, kuwaasoo dowladdu maal-gelineyso si ay culeys siyaasadeed usaaraan Shariif Xasan Aadan.
Gollaha Wasiiradda Koonfur Galbeed ayaa isku raacay inay dhaqan-geliyaan go'aankii kasoo baxay shirka Kismaayo ee Madasha maamuladda xubnaha ka ah dowladda, kaasoo Villa Soomaaliya xiriirka loogu jaray, inkasta oo mucaarad badan uu la kulmay.
Hay'addaha amaanka ee Koonfur Galbeed ayaa la faray sida uu ogaadey Warsidaha GO inay xakameeyaan dhaqdhaqaaqyadda ay degaanada maamulkaan ka sameynayaa xubnaha mucaaradka ku ah Shariif Xasan, kaasoo doonaya inuu mar kale soo laabto.
Roobow ayaa kasoo goostay Al-Shabaab 2013, isagoo kasoo noqday Afhayeen iyo ku xigeenka hogaamiyihii la dilay ee Kooxdan, Axmed Godane, waxaana uu isku soo dhiibay dowladda Federaalka sanadkii tagey.
Odayaasha ayaa waxay sheegeen in tallaabadan ay u sameeyeen samatabixinta....
Soomaliya 04.10.2018. 08:45
Madaxda KG oo la kala saftay musharixiinta iyo Roobow oo lagu dhegan yahay
Soomaliya 05.12.2018. 09:43
Kulanka Madaxda Soomaaliya oo Rasmi uga Furmey Magaalada Muqdisho
Soomaliya 30.10.2017. 19:45
Xildhibaanno magaalada Muqdisho ku geeriyoodey
Soomaliya 30.12.2018. 18:42